United Airlines na-agbasawanye mmekọrịta ya na Copa na Avianca
Home » Akụkọ ụgbọ elu » United Airlines na-agbasawanye mmekọrịta ya na Copa na Avianca
United Airlines taa mara ọkwa na ya na Compañía Panameña de Aviación SA (Copa), Aerovías del Continente Americano SA (Avianca) na ọtụtụ ndị mmekọ mmekọ nke Avianca, maka nkwekọrịta azụmahịa (JBA), na-echere nkwado gọọmentị, ka a tụrụ anya nye ndị ahịa, obodo na ahịa ahịa maka njem ụgbọ elu n'etiti United States na obodo iri na itoolu na Central na South America.
Ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ maka ndị ahịa
Site na ijiko uzo uzo ha na etinyeko onu ahia nke JBA, United, Avianca na Copa iji nye ndi ahia otutu elebara anya, gunyere:
• Integrated, enweghị nkebi ọrụ karịrị 12,000 obodo abụọ
• zọ ọhụrụ na-enweghị nkwụsị
• Mgbakwunye ụgbọ elu na ụzọ ndị dị ugbu a
• Belata oge njem
Mee ka uru ndị akụ na ụba baara ndị ahịa na obodo anyị na-ejere ozi
Ndị na-ebu ụgbọelu na-atụ anya ka JBA mee ka okporo ụzọ na-ebuwanye ibu n'okporo ụzọ dị n'akụkụ ọnụ ụzọ osimiri gaa n'ụsọ oké osimiri, nke a na-atụ anya na ọ ga-enyere aka weta ego ọhụrụ ma mepụta ohere mmepe akụ na ụba. Ọzọkwa, a na-atụ anya ka JBA nye ndị ahịa nhọrọ nhọrọ ụgbọ elu nke codeshare gbasaa, ọnụ ahịa asọmpi, ahụmịhe nke njem na ọrụ ndị ahịa ka mma, na-ebute uru ndị ahịa bara uru.
Mma ijere ndị ahịa anyị ozi
Ọzọkwa, ikwe ka ndị ọrụ atọ ahụ jeere ndị ahịa ozi dị ka a ga - asị na ha bụ otu ụgbọelu ga - enyere ụlọ ọrụ ndị ahụ aka ịhazi usoro mmemme ha ugboro ugboro, hazie usoro ụgbọ elu ma melite akụrụngwa ọdụ ụgbọ elu.
"Nkwekọrịta a na-anọchi anya isi na-esote na njem ụgbọelu US-Latin America," ka Scott Kirby, onye isi ala United kwuru. "Anyị nwere obi ụtọ iso ndị mmekọ Star Alliance Avianca na Copa na-arụ ọrụ iji weta asọmpi dị oke mkpa na uto n'ọtụtụ ahịa na-enweghị isi ma na-enye ahụmịhe kachasị mma maka azụmahịa na ndị ahịa na-atụrụ ndụ na-agafe Western Hemisphere."
Pedro Heilbron, onye isi ndị isi nke Copa Airlines kwuru, "Anyị nwere obi a toụ iji mee ka mmekọrịta anyị na United Airlines gbasie ike ma na-atụ anya ịbawanye nhọrọ ndị ọrụ maka ndị ahịa anyị site na isoro Avianca na-arụkọ ọrụ ọnụ." "Anyị kwenyere na nkwekọrịta a na-abara ndị njem anyị uru site na ịnye ọnụ ahịa asọmpi na netwọkụ dị elu nke ihe karịrị ebe 275 na Latin America na US, ma na-akwalite mmụba na ihe ọhụụ n'ime ụlọ ọrụ ụgbọ elu na America."
"Anyị ji n'aka na ọnụ anyị dị ike na United States - Latin America ahịa karịa nke ọ bụla n'ime ụgbọ elu atọ ahụ n'otu n'otu," ka Hernan Rincon, onye isi oche Avianca - onye isi ọrụ kwuru. "Mmekọrịta a ga - enye Avianca ohere iwusi ọnọdụ ya ike dị ka onye ọkpụkpọ ọkwa mbụ na ụlọ ọrụ ụgbọ elu na America ka anyị ga - eme ka United States na Copa gbasaa mpaghara anyị na kọntinent ahụ, na - enye ndị ahịa anyị njikọ dị mma."
JBA na-asọ mpi nke na-abara ndị ahịa uru
Agbanyeghị na egosila JBA gburugburu ụwa iji baara ndị ahịa uru ma bulie asọmpi, ugbu a pasent 99 nke ndị njem ụgbọelu US nke na-eme njikọ na Central na South America na-eme ya na-enweghị JBA. Asọmpi n'ahịa US-Latin America etoola ma na-agụnye ọtụtụ ndị na-ebu ụgbọelu na-enye ọrụ n'ofe ọtụtụ ọnụahịa. Ma ahịa enweghi oke ntinye ego, ndi mmadu nke na-adighi na ndi na-ebu agha na ndi mmadu nwere ike ime ka ndi mmadu nwee uru. JBA na-anọchite anya ọmarịcha ngwaahịa ọhụụ kachasị mma, nke ga-eme asọmpi n'ahịa a siri ike karị.
"Nyocha anyị gosiri na JBA na-anọpụ iche na United, Copa na Avianca ga-enye ndị ahịa nnukwu njem uru dị ukwuu n'etiti mba ndị ahụ," ka Dr. Darin Lee, osote onye isi oche nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka akụ na ụba Compass Lexecon na ọkachamara ụlọ ọrụ ụgbọ elu kwuru. “JBA a ga - enyere United, Copa na Avianca aka ịsọ mpi n’ụzọ dị irè karị, na-enye ụgwọ ọrụ asọmpi ma na-abawanye ọrụ, na - agba ume ọhụrụ na iguzobe ahịa siri ike ma sie ike.”
Iji mee ka nhazi dị omimi achọrọ iji nye ndị ahịa a, ndị obodo na ahịa, atụmatụ United, Copa na Avianca ka itinye akwụkwọ n'oge dị nso maka nnabata usoro iwu nke JBA yana onyinye mkpuchi mgbochi ntụkwasị obi na Ngalaba Transportgbọ njem US na ndị ọzọ na-achịkwa iwu. Ndi otu a adighi atumatu oru nke JBA ruo mgbe ha natara nkwenye ochichi di nkpa. JBA ugbu a gụnyere imekọ ihe ọnụ n'etiti US na Central na South America, ewepu Brazil. Site na nkwekọrịta nkwekọrịta mepere emepe mechiri emechi n'etiti US na Brazil, ndị na-ebu ụgbọ ahụ na-enyocha ohere ị gbakwunye Brazil na JBA.
Holland America Line na-ewere nnyefe nke ụgbọ mmiri Nieuw Statendam
Mahadum Nile: Ihe mgbakwunye kachasị ọhụrụ na African Tourism Board
Akụkọ Culinary Travel
Nwanyị eze ukwu nke Boon setịpụrụ maka mmeghe June